Ny GNOME dia manatsara ny emojis ary manohy mitondra fampiharana amin'ny libadwaita sy GTK4 | Ubunlog
Ny GNOME dia manatsara ny kisary emoji ary manohy mitondra fampiharana amin'ny libadwaita sy GTK4
Toy ny isan-kerinandro, mpankafy, na mpampiasa tsotra, ny GNOME ary KDE dia hitanay ny vaovao tonga na ho tonga amin'ireo birao roa be mpampiasa indrindra amin'ny tontolon'ny Linux. Amin'ny Zoma dia GNOME no mamoaka ny zavatra nataony tao anatin'ny fito andro farany, ary ny lahatsoratra tamin'ity herinandro ity dia nanomboka tamin'ny sarin'ny lohateninao amin'ity lahatsoratra ity.
La naoty amin'ity herinandro ity dia nomena anarana hoe Karazana loko feno, ary efa misy izany, farafaharatsiny amin'ny endrika kaody. Anisan'ny hatsarain'izy ireo dia samy manana ny emojis izahay, izay fantatray amin'ny hoe emoticons, ary koa marika, toy ny mari-piatoana, zana-tsipìka sy ny hafa. Ireto ambany ireto ny vaovao izay tao amin'ny GNOME tamin'ny herinandro teo anelanelan'ny 19 sy 26 Novambra, teo anelanelan'izany, toy ny tamin'ny oktobra hafa, GTK4 sy libadwaita no voatonona be indray.
Ny endri-tsoratra dia manana dikan-teny mampiasa libadwaita sy GTK4 ary misy fanatsarana hita maso amin'ny fototry ny kaody manontolo.
Be dia be ny bug no raikitra ao amin'ny Vala, ilay fiteny fandaharana miompana amin'ny zavatra.
Tonga tao libadwaita ny API Animation Time.
Indray mandeha izy ireo dia nilaza taminay momba ny zavatra manaitra ahy indrindra: ny fitaovana fisamborana. Tamin'ity herinandro ity dia voalaza fa voaporitra kely kokoa izany, nampiana hitsin-dàlana fitendry hisafidy faritra, efijery na varavarankely ary ny bokotra fikandrana fisafidianana dia tsy mandeha amin'ny fomba fizarana efijery satria tsy mbola eo.
Azo averina ao amin'ny xdg-desktop-portal izao ny fotoam-pizarana efijery.
Libgnome-desktop dia nizara ho tranomboky telo misaraka, ary ny roa amin'izy ireo (GnomeRR sy GnomeBG) dia nafindra avy amin'ny GTK3 mankany GTK4. Izany dia hamaha ny seranan-tsambo GTK4 amin'ny singa rafitra isan-karazany.
Navoaka ny dikan-tsarimihetsika voalohany an'ny GWeather 4, ary mampiasa GTK4.
Navoaka ny Tangram 1.4.0 ary misy ny laharam-pahamehana amin'ny fampandrenesana amin'ny alàlan'ny tabilao, tsindrio eo afovoany na Ctrl + tsindrio hanokafana rohy ao amin'ny navigateur default ary misy fanamboarana natao ho an'ny tranokala malaza misy famantarana ivelany.
Nahazo fanohanana ho an'ny fanamarinana ny fragments, ary afaka mifandray amin'ny fivoriana lavitra voaaro amin'ny tenimiafina ianao izao.
Mahjongg dia nentina tany amin'ny GTK 4 sy libadwaita.
Dika vaovao Flatseal izay misy fanatsarana hita maso sy fanamboarana bug.
Fanatsarana lehibe amin'ny GNOME Shell Extensions, toy ny mpifidy mombamomba.
Ary izany dia tamin'ity herinandro ity tao amin'ny GNOME
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ny GNOME dia manatsara ny kisary emoji ary manohy mitondra fampiharana amin'ny libadwaita sy GTK4
Ny KDE dia mamarana ny volana Novambra amin'ny fanamboarana ny bug maro ao amin'ny rindrambaiko
GNUstep, tontolo iainana miompana amin'ny fampandrosoana miompana amin'ny sehatra cross-platform